Sithanda Okwasekhaya: i-Souskluitjies ngendlela ugogo ayeyipheka ngayo
Partnered Content | September 27, 2021
La madombolo alula acwiliswe kusiraphu ye-buttery cinnamon awukudla kwaseNingizimu Afrika okuyintandokazi nokuletha injabulo. Ama-Souskluitjies ayisibonelo esihle sokuthi umlando wokudla kwaseNingizimu Afrika ususelwa kumithelela yamasiko amaningi.
Ngokusho kombhali wezokudla uJeanne Horak we-Cooksister, le ndlela yokuphaka amadombolo ne-sweet sauce yayaziwa emizini eminingi yamabhunu ngokuthi i-Duitse kluitjies (amadombolo amaJalimani) ngenxa yokuthi afana ne-dampfnudeln. Njengamaresiphi esintu amaningi, i-souskluitjies idinga izithako ezimbalwa ezitholakala ekhabetheni.
Ukudla okunhlobonhlobo kwamasiko ethu kuyinto emnandi esihlanganyela kuyo sonke njengezakhamizi zaseNingizimu Afrika. Thola okunye ngezidlo nezindaba zaseNingizimu Afrika ku-https://bit.ly/3jf2Qkv
250ml (inkomishi e-1) ye-cake flour
5ml (ithispuni eli-1) ka-baking powder
60ml (amathispuni ama-4) webhotela elithanjisiwe
30ml (izipuni ezi-2) wobisi
2.5ml (ithispuni eliwu-½ ) we-vanilla essence
1.25ℓ wamanzi abilayo
i-cinnamon sugar, ezofafazwa ngaphezulu
30ml (amathispuni ama-2) ebhotela elincibilkisiwe, ezophakwa
1.25ml (ithispuni eliyi-¼) e-Robertsons Cinnamon, ezophakwa
250ml (inkomishi e-1) yamanzi
5ml (ithispuni eli-1) we-vanilla essence
induku ye-cinnamon e-1
ama-star anise agcwele ama-2
ama-clove agcwele ama-5
Hlanganisa ufulawa, u-baking powder nosawoti esitsheni. Faka ibhotela elithanjisiwe ngeminwe yakho ezithakweni ezomile ize ingxube ifane nemvuthuluka yesinkwa. Kwenye indishi, gaya amaqanda kahle, ufake ubisi, ushukela ne-vanilla essence phakathi bese ugaye uhlanganise. Faka ingxube yamaqanda ezithakweni ezomile bese uxove kahle kuze kube yinhlama ethambile.
Thatha ipani elinesivalo isivala ngci, bilisa amanzi angu-1.25 litha (amanzi kumele abe ngama-3cm ukushona epanini). Faka inhlama egcwele kumathispuni kahle emanzini abilayo (ufake agcwale kahle epanini). Mboza ipani ngesivalo salo bese upheke emlilweni ovutha ngokuphakathi nendawo imizuzu eyi-10. Ungalivuli ibhodwe ubheke amadombolo ngenkathi esaphekwa, ngoba lokhu kwenza ukuthi apatshake. Usebenzisa isipuni esinezimbobo, khipha amadombolo epanini uwafake esitsheni sokuphakela. Fafaza i-cinnamon sugar ngaphezulu bese uwagcine efudumele.
Ukwenza i-sauce, faka zonke izithako zayo epanini bese ulibeke emlilweni, ugovuze kuze kuncibilie wonke ushukela.
Thela ibhotela elincibilikile phezu kwama-souskluitjies bese ufafaze enye i-cinnamon, ngokokuthanda kwakho. Thela i-sauce phezu kwamadombolo bese uphake ngaleso sikhathi.
Sazise uma uzame le resisphu ye-Souskluitjies ngokukala izinga lamaphuzu nokubuyekeza ku-https://bit.ly/2W9iHZd